Linux Mint 18.3 Sylvia yave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Imwe yeanonyanya kufarirwa uye anoshandiswa kupihwa kweGnu / Linux (zvirinani maererano neDistroWatch), Linux Mint, yaburitsa vhezheni itsva yakagadzikana. Iyi vhezheni itsva yave ichizivikanwa se Linux Mint 18.3 Sylvia.
Iyi vhezheni itsva inowanikwa neCinnamon neMATE madhesiki. Iyo Xfce vhezheni ichasunungurwa mumazuva mashoma. Rangarira kuti iyo KDE vhezheni yakasiyiwa uye hakuzove neiyo vhezheni ne KDE, kunyangwe kana ekare mavhezheni eLinux Mint KDE Edition akachengetwa.
Iyo nyowani vhezheni yeLinux Mint inoenderana nemabasa matsva anga akurukurwa panguva yayo yekuvandudza. Ndokunge, iyo vhezheni itsva inoshandura zvakanyanya Software Center, kushandura iko kuita chitoro chakafanana neGoogle, uko kwete chete kunogona kupihwa zvikumbiro zvakabhadharwa asi isu tichawanawo kunyorera muFlatpak fomati.
Izvo zvekuchengetedza zvikumbiro zvakagadziridzwa zvakare, kusanganisira Timeshift kugadzira makopi ekuchengetedza uye kurerutsa mashandiro ezvekushandisa kwevanonyanya kushandisa vashandisi.
Linux Mint 18.3 Sylvia inoenderera mberi nekushandisa Ubuntu 16.04 LTS sehwaro hwekugovera, kugara nhaka zvinhu zvakadai sekernel 4.10 kana kugadzirisa rutsigiro. Chii chimwe iyi vhezheni inouya neCinnamon 3.6, yazvino vhezheni yedesktop iyi inogadzirisa mamwe mabugs uye inowedzera zvigadziriso senge online maakaundi, Gnome Mitambo kana kupa windows uye desktop animations. Mamwe iwo madheta eshanduro anogona kuwanikwa mu Linux Mint kuburitsa manotsi.
Tinogona kuwana iyo ISO mufananidzo weLinux Mint 18.3 Sylvia kuisirwa kuburikidza webhusaiti yekurodha, uko kwatinozowana kwete chete iyo 64-bit vhezheni asi zvakare 32 bit vhezheni. Kunyangwe ramangwana nyowani vhezheni yeUbuntu isingave iine 32-bit chikuva.
Vashandisi vanoto shandisa Linux Mint, mune imwe nyaya yemaawa (kana vasati vagamuchira meseji yacho) vachange vaine meseji ichavabatsira kuti vadzokere kuchinyorwa chitsva cheLinux Mint.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux Mint 18.3 Sylvia yave kuwanikwa
Kugadziridza zvakanzi !!!
Mangwanani akanaka .. Ndeipi nyika yandinosarudza kugadzirisa zvinyorwa zve linux mint sylvia 18.3 ?? Ndinobva kuVenezuela
Pindura kuna babaiv
Mhoro zvakanaka! 18.3 ichave iine KDE vhezheni, asi ichave yekupedzisira kuzviita. Iyo beta yakaburitswa pane yako webhusaiti mazuva maviri apfuura:
Zita rokutanga Marta akadaro
Inotadza kupfuura pfuti yepasirefu, dzimwe nguva mu linux pane kugadzirisa zvinhu ivo vanokwirisa zvakanyanya.
Pindura kuna Marta Alvarez